ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်ရှိ ယိုးတရုတ်ရဲကင်းစခန် ကို AA က အင်အားအလုံးအရင်းဖြင့် စီးနင်းဝင်တိုက?? - Yangon Media Group
ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်ရှိ ယိုးတရုတ်ရဲကင်းစခန် ကို AA က အင်အားအလုံးအရင်းဖြင့် စီးနင်းဝင်တိုက??
ရန်ကုန်၊ မတ် ၁ဝ – ရခိုင်ပြည်နယ် ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်ရှိ ရဲကင်း စခန်းတစ်ခုကို AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က အင်အား ၁ဝဝ ခန့် ဖြင့် စီးနင်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုးဦးကျဆုံး ပြီး နှစ်ဦးဒဏ်ရာရကာ တစ်ဦးပျောက်ဆုံးနေသည့်အပြင် လက်နက် ၁၂ လက်ကိုလည်း ယူဆောင်သွားကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ် ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ် ယိုးတရုတ် ကျေးရွာ အရှေ့ဘက်ယိုးချောင်းကမ်းနံဘေးရှိ ယိုးတရုတ်ရဲ ကင်းစခန်းအား မတ် ၉ ရက် ည ၁၁ နာရီ မိနစ် ၂ဝ ခန့်မှ စတင်ကာ ဗဗလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အင်အား ၁ဝဝ ခန့်က ရဲစခန်း ၏အရှေ့၊ အနောက်၊ ယာဘက်မျက်နှာစာသုံးဖက်မှ သာလွန် အင်အားအသုံးပြုကာ လက်နက်ကြီး၊ လက်နက်ငယ်များဖြင့် အဆက်မပြတ် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက် ခဲ့ကြောင်း၊ ထို့နောက် ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်များအား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ကအော်ဟစ်၍ လက်နက်ချခိုင်း သော်လည်း လက်နက်မချဘဲ ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ ည ၁၂ နာရီခန့်တွင် တိုက်ခိုက်မှုရပ်တန့် ပြီး လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ပြန်လည် ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ကြောင်း ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ စုံစမ်း သိရှိရသည်။
ရဲကင်းစခန်းတွင် အရာရှိ၊ စ ခန်းမှူး၊ ရဲအုပ်နှင့် အခြားအဆင့် ၁၁ ဦး စုစုပေါင်း ၁၂ ဦးသာရှိ ကြောင်း၊ တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့် အခြားအဆင့် ရဲအရာခံတစ်ဦး၊ ရဲတပ်ကြပ်ကြီးတစ်ဦး၊ ရဲတပ်ကြပ် နှစ်ဦး၊ ရဲဒုတပ်ကြပ်လေးဦးနှင့် ရဲ တပ်သားတစ်ဦး စုစုပေါင်းကိုးဦး ကျဆုံးပြီး စခန်းမှူးပါ နှစ်ဦးဒဏ် ရာရခဲ့ကာ ရဲတပ်သားတစ်ဦး လည်း ပျောက်ဆုံးလျက်ရှိကြောင်း၊ ရဲကင်းစခန်းမှ ၃၈ ဗို့ ခြောက်လုံး ပြူးတစ်လက်နှင့် မောင်းပြန်သေ နတ် ၁၁ လက်တို့ကို လက်နက် ကိုင်အဖွဲ့က ယူဆောင်သွားကြာင်း ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။
ကျဆုံးသွားသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် တို့၏ အလောင်းများကိုပုဏ္ဏားကျွန်း မြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ပို့ဆောင် ထားကြောင်း၊ ကျဆုံးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ကိုးဦးအနက် ရှစ်ဦးမှာ ရခိုင်လူမျိုး များဖြစ်ကြောင်း ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့ နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။
ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ် ရဲတပ် ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ”အလောင်း တွေ သွားကောက်တယ်။ အလောင်း တွေ ဆေးရုံပို့တယ်။ ဆေးစာတွေ လုပ်နေတယ်။ ဗဗ လက်ချက်ပဲ ပေါ့။ သာလွန်အင်အားသုံးတာ ပေါ့။ လူလည်း သာတယ်။ လက် နက်လည်းသာတာပေါ့။ သူတို့ လက် နက်တွေက ပိုကောင်းတာပေါ့။ ရဲစခန်းကို လာတိုက်ပြီးတော့ အ မြတ်ထုတ်သွားတာပေါ့။ အားနည်း တဲ့လူကိုအနိုင်ကျင့်တယ်။ အား ကြီးတဲ့လူကျတော့ ယှဉ်မလုပ်နိုင် ဘူးလေ။ နယ်ရဲကတော့တရားဥပ ဒေ စိုးမိုးရေးပဲလုပ်နေတာလေ။လုံခြုံရေးအပိုင်းကတော့ အား နည်းတာပေါ့။ လုံခြုံရေးပိုင်းက တပ်လောက်အားမကောင်းဘူး။အဲဒါကို အမှတ်ယူတာပေါ့ ” ဟု ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ မတ် ၁ဝ ရက်တွင် ပြောသည်။
အခင်းဖြစ် ရဲကင်းစခန်းသို့ မတ် ၁၁ ရက်တွင် သက်ဆိုင်ရာမှ တာဝန်ရှိသူများလာရောက်ပြီး ထောက်ပံ့ကူညီမည်ဖြစ်ကြောင်း ¤င်းက ဆက်ပြောသည်။
”ကျဆုံးတာက ကိုးဦး၊ အ ခြားအဆင့်တွေ၊ ဒဏ်ရာရတာက နှစ်ဦး၊ ပျောက်နေတဲ့သူကတော့ အခုထိ အဆက်အသွယ် မရသေး ဘူး။ လက်နက်တွေလည်းပါသွား တယ်။ ရဲကင်းကိုတော့ လောလော ဆယ် အင်အားတိုးမြှင့်ချထား တယ်။ ကျေးရွာလုံခြုံရေးအတွက် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုမှ တမင်သတ်သတ် အနိုင်ယူတာလို့ ပဲပြောချင်ပါတယ်” ဟု ¤င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် အခင်းဖြစ်ရာ အနီးတစ်ကြော၌ တပ်မတော်မှ နယ်မြေရှင်းလင်းပြီး လိုက်လံချေ မှုန်းလျက်ရှိကြောင်း မြို့နယ်ရဲတပ် ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးကပြောသည်။
တိုက်ခိုက်ခံရသည့် ရဲကင်းစ ခန်းဝင်းအတွင်း မြေပြင်နှင့် အ ဆောင်ထဲတွင် ရဲအလောင်းများ ကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ယိုးတရုတ်ကျေး ရွာတွင် နေထိုင်သည့် မူလတန်း ကျောင်းအုပ်ကြီး ဦးကျော်မောင် က ပြောသည်။
” ည ၁၁ နာရီ ၁၅ လောက် မှာ သေနတ်သံတွေကြားတယ်။ ယိုးတရုတ် စခန်းဘက်မှာ။ အဲဒါ ကြားပြီးတော့ အမြောက်သံ နှစ် ချက်ကြားတယ်။ ၁၅ မိနစ်လောက် မှာ သေနတ်သံတွေ ပျောက်သွား ပြီ။ မိုးလင်းသတင်း နားထောင် လိုက်တော့ ရဲကိုးဦးသေတယ်။ နံ နက် ၈ နာရီလောက် ရဲကင်း စ ခန်းကိုသွားတော့ လူတွေက ဟိုမှာ တစ်ယောက်၊ ဒီမှာတစ်ယောက်၊ အထဲမှာ တစ်ယောက်၊ အပြင်မှာ နှစ်ယောက်၊ သုံးယောက် သေနေ ပြီးတော့ စောင်အုပ်ထားတာတွေ့ တယ်။ မျက်နှာတွေတော့ မမြင် တော့ဘူး။ ရဲကင်းကတော့ ပျက် စီးတာတွေ အများအပြားတော့ မတွေ့ဘူး။ လူတွေပဲ ရွေးပြီးတိုက် ခိုက်တာ ထင်တယ် ” ဟု ¤င်းက ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ မတ် ၁ဝ ရက်တွင် ပြောသည်။
ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့မှ ၁၆ မိုင်ခွဲ အကွာတွင် အခင်းဖြစ်ရာ ယိုးတရုတ် ကျေးရွာတည်ရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ ၁၅ဝဝ ခန့် ရှိပြီး လူဦးရေ ၅ဝဝဝ ကျော်ရှိ ကြောင်း ¤င်းကဆက်လက်ပြော သည်။
”စာမေးပွဲကာလလည်း ဖြစ် နေတော့ အဲလုိုမဖြစ်သင့်ဘူး။ မ နက်ဖြန်ဆို ဓာတုဗေဒ ဖြေရမယ် လေ။ ဒီမှာက တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဖြေဆိုတဲ့ ကျောင်းသားတွေ ၇၅ဝ နီးပါးလောက်ရှိတယ် ” ဟု မူလ တန်းကျောင်းအုပ်ကြီး ဦးကျော် မောင်က ပြောသည်။
အခင်းဖြစ်ပြီးနောက် ယိုးတ ရုတ်ကျေးရွာအတွင်း လူသွား လူ လာနည်းပြီး ဈေးဆိုင်များလည်း ပိတ်ထားကြောင်း၊ ရွာသားများ လည်း အပြင်မထွက်ရဲကြကြောင်း ကျေးရွာရာအိမ်မှူး ဦးသာဂန်းက ပြောသည်။
”ညက လက်နက်သံတွေကြား ပြီးတော့ မနက်သွားကြည့်တော့ ရဲအလောင်း ကိုးလောင်းတွေ့တယ်။တစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးတော့ ရွာထဲက လူတွေက ကြောက်နေရတယ်”ဟု ¤င်းက ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြော သည်။
ယိုးတရုတ်ရဲကင်းစခန်းသည် နယ်မြေလူထုအတွက် ရပ်ရွာအေး ချမ်းသာယာရေးနှင့်တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုဆောင် ရွက်ပေးနေသည့်အပြင်၂ဝ၁၉ခု နှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကျင်း ပနေသည့်ယိုးတရုတ်ကျေးရွာရှိ စာစစ်ဌာနအဖြေလွှာများနှင့် မေး ခွန်းများ၏ လုံခြုံရေးကိုပါဆောင် ရွက်ပေးနေသည့်စခန်းတစ်ခုဖြစ် ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ သ တင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။ ယင်း ကဲ့သို့ တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖွင့်လှစ်ထားသော စာစစ်ဌာနကို ပြောင်းရွှေ့ဦးမည်မဟုတ်ဘဲ စာ မေးပွဲကို ဆက်လက်ကျင်းပမည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ယင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်ပညာ ရေးမှူးရုံးမှ အရာရှိတစ်ဦးက ”ကျွန် တော်တို့ စာမေးပွဲကို အဲဒီစာစစ် ဌာနမှာပဲဆက်ပြီးကျင်းပမှာပါ။ အ ထက် အဆင့်ဆင့်ကိုလည်း တိုက် ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ စာစစ်ဌာနလုံခြုံ ရေးကိစ္စတွေကိုလည်း တင်ပြထား ပြီးပါပြီ”ဟု ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ မတ် ၁ဝ ရက်ကပြောကြားသည်။
၂ဝ၁၉ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် တန်းစာမေးပွဲ မကျင်းပမီအချိန်က လည်း ရသေ့တောင်မြို့နယ်၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ်ရှိစာစစ်ဌာန တစ်ခုကို လုံခြုံရေးမပေးနိုင်သဖြင့် ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ရသလို ဘူးသီး တောင်ရှိ စာစစ်ဌာနနှစ်ခုကိုလည်း စာမေးပွဲ စတင်မကျင်းပမီ တစ် ရက်အလိုက ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ရ သေးကြောင်း သိရသည်။
”ဒီနေ့ နံနက်က တခြားရွာ တွေက ဆယ်တန်းလာဖြေတဲ့ ကျောင်းသားတချို့နဲ့ မိဘတွေဆို ကိုယ့်ရွာ ကိုယ်ပြန်သွားကြပြီ၊ မ နေဝံ့ကြတော့ဘူး။ သူတို့ မနက် ဖြန် စာမေးပွဲလာဖြေ၊ မဖြေတော့ မပြောတတ်သေးဘူး။ ရွာထဲမှာ တော့ တော်တော်ကြောက်နေကြ တယ်” ဟု ယိုးတရုတ်ကျေးရွာသား တစ်ဦးက ပြောသည်။
တိုက်ခိုက်ခံရမှုအတွင်း ကျ ဆုံးခဲ့သည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ကိုးဦးအ နက် ခုနစ်ဦး၏အလောင်းအား မတ် ၁ဝ ရက် ညနေပိုင်းတွင် ပု ဏ္ဏားကျွန်းမြို့ သင်္ချိုင်းတွင်သင်္ဂြိုဟ် ခဲ့ပြီး ကျန်သည့် နှစ်ဦးအလောင်း အား ယိုးတရုတ်သင်္ချိုင်းတွင် သင်္ဂြိုဟ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်၊ ညပိုင်းကလည်း ပုဏ္ဏားကျွန်း မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-စစ်တွေ ကားလမ်း ပေါ်တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ပိုင်ယာဉ်များ ကို ဗဗ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က မိုင်း ခွဲ၍ ခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင် နှစ်ဦးကျဆုံးခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် ဇန်န ဝါရီ ၄ ရက် (လွတ်လပ်ရေးနေ့)တွင် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်ရှိ ရဲ ကင်းစခန်းလေးခုကို အေအေ မှ တစ်ပြိုင်နက် ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက် သဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၃ ဦးကျဆုံးပြီး ကိုးဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့သေးသည်။
မင်းလှမြို့နယ်ရေနံလက်ယက်တွင်းမှ ရေနံစိမ်းနှင့် ဂက်စ်များလျှံထွက်၍ မီးလောင်မှု ၃၆ နာရီခန့်?
စံချိန်တင်ကြေးပေါင် ၇၂ သန်းဖြင့် ကီပါကို ချဲလ်ဆီး အပြီးသတ်ခေါ်ယူ၊ ကော်တွိုက်စ်ကို ရောင်းရန?
လာဘ်စားခဲ့သည်ဆိုသော အကောက်ခွန် ဝန်ထမ်းများအမှု သက်သေများထံမှ ကြိုတင် ထွက်ချက်ယူ